Isipili esinye, ezibini, ezibubuso obuthathu ziimpawu zehlabathi, zomzimba kunye nezeengqondo-zehlabathi; iglasi yokomoya, kwisibuko sokomoya.
Isibuko sokomoya lihlabathi lendalo. Ilizwe lengqondo, ilizwe lokuphuma kwindalo; Iiplanethi zokomoya ezibonisa ukubonakaliswa kwemifanekiso kunye nokuzibonakalisa; Umhlaba obonakalayo luphawu lokubonakalisa.
Vol. 9 I-Meyi, 1909. 2
Ngalo lonke ixesha sijonga esipilini sibona into emangalisayo, emangalisayo kwaye engaqondakali. Imfihlakalo ilele kungekuphela emfanekisweni nasekubonakaliseni kwayo, kodwa esipilini ngokwayo, into leyo eyibonakalisayo, injongo eyikhonzayo, nento eyifuziselayo.
Yintoni le siyibiza ngokuba sisiboniso, sisithunzi? hayi? Kodwa nokuba sisithunzi, siyintoni na isithunzi? Eyona njongo iphambili isebenza njengesibuko kwaye isetyenziselwa yona ikakhulu kukuhlengahlengisa indlela yethu yokunxiba nokubona indlela esbonakala ngayo kwabanye. Isipili luphawu lokukhohlisa, olungelulo olwahlukileyo kokoqobo. Izibuko ziimpawu zehlabathi, zomzimba, zeengqondo, nezokomoya.
Njengezinto ezininzi eziyimfuneko kwimpucuko, samkela izibuko njengezinto ezilula kunye nezivumelwano ezifanelekileyo kwaye sizithatha njengeziqwengana zefanitshala. Izibuko bezisoloko zibukelwa phezulu ngabantu bakudala kwaye zithathwa njengemilingo, engaqondakaliyo nengcwele. Ngaphambi kwenkulungwane yeshumi elinesithathu ubugcisa bokwenza izibuko babungaziwa eYurophu, kwaye kangangeenkulungwane imfihlo yokuvelisa yayigcinwe ngumona ngabantu ababenayo. Isinyithi, isilivere kunye nentsimbi ekuqaleni zazisetyenziswa njengezibuko ngokuziswa kwipolishi ephezulu. Emva kwexesha kwafunyaniswa ukuba iglasi iyakusebenza ngendlela enye xa ixhaswa ziintsimbi zeentsimbi ezifana ne-tin, lead, zinc kunye nesilivere. Ekuqaleni, izibuko ezenziwa eYurophu zazincinci ngobukhulu kwaye zibiza kakhulu, ezona zinkulu zazinobubanzi obuzi-intshi ezilishumi elinambini. Izibuko zanamhlanje azibizi kwaye zenziwa kuwo nawuphi na ubungakanani obufunayo.
Isibuko ngumzimba wento ukusuka, ukuya, ngaphakathi, okanye odlulayo, unokukhanya kunye nefom ngokukhanya.
Isibuko yile nto ibonakalisa. Nantoni na ebonakalayo inokubizwa ngokufanelekileyo njengesipili. Isibuko esigqibeleleyo sesona sibonisa ngokugqibeleleyo. Iyagoba okanye ibuyise umva ukukhanya, okanye izinto ezikhanyayo zibonakalisiwe. Isibuko siyagoba, sijika, okanye siyilahle, imbonakalo yomfanekiso okanye ukukhanya okuphoswe phezu kwawo ngokwendawo okanye ikona apho ibekwe khona emfanekisweni okanye ukukhanya.
Isibuko, nangona siyinto enye, sidityaniswe ngamalungu athile okanye amalungu, onke ayimfuneko ukwenza isibuko. Amalungu abalulekileyo kwisipili yiglasi kunye nentsimbi okanye i-amalgam yesinyithi.
Xa iglasi inemvelaphi yayo isisibuko. Sisipili esikulungele ukubonakalisa. Kodwa isipili asinakubonakalisa izinto ebumnyameni. Ukukhanya kuyimfuneko kwisibuko ukubonisa nayiphi na into.
Kukho izibuko ezigqibeleleyo nezingafezekanga. Ukuze ube sisipili esigqibeleleyo, iglasi kufuneka ingabinasiphoso, icace gca, kwaye zombini umphezulu kufuneka ungqinelane kwaye ungqineke ngokulinganayo kuyo yonke. Amasuntsu edityum kufuneka abenombala ofanayo kunye nomgangatho kwaye alale kunye kwisiseko esinye esidityanisiweyo esisasazeka ngokuchanekileyo kwaye singenasici kwiglasi. Isisombululo okanye isithako esilungisa imvelaphi yeglasi kufuneka singabi namibala. Emva koko ukukhanya kufuneka kucace kwaye kugxilile. Xa zonke ezi meko zikhoyo sinesipili esigqibeleleyo.
Injongo yesipili kukubonisa into njengoko injalo. Isibuko esingafezekisanga sikhulisa, sinciphise, sicaphukise, oko sikubonisayo. Isibuko esigqibeleleyo sibonisa into njengokuba injalo.
Nangona ibonakala ilula ngokwayo, isipili siyinto engaqondakaliyo kunye nemilingo kwaye senza omnye wemisebenzi eyimfuneko kwaye ibaluleke kakhulu kweli lizwe lomzimba okanye kwelinye lamazwe abonisiweyo. Ngaphandle kwezibuko akunakwenzeka ukuba i-Ego ingazi nakuphi na ukubonwa kwehlabathi, okanye ukubonakaliswa kwehlabathi. Kukudala, ukuvela, ukucacisa kunye nokubonisa ukuba umntu ongabonakalanga ubonakalisiwe. Izibuko azikhawulelwanga ukuba zisetyenziswe kwihlabathi elibonakalayo. Izibuko zisetyenziswa kuzo zonke izinto zomhlaba. Izibuko zakhiwe ngezinto zehlabathi ezisetyenziswa kuzo. Izixhobo kunye nomgaqo abasebenza kuzo zohlukile kwilizwe ngalinye lehlabathi.
Kukho iintlobo ezine zezibuko: izibuko ezibonakalayo, izibuko zengqondo, izibuko zengqondo kunye nezibuko zokomoya. Kukho iintlobo ezininzi zolu hlobo kwezi zibane. Uhlobo ngalunye lwesipili sinelizwe laso elithile kunye nezinto zalo ezahlukeneyo, kwaye zozine iintlobo zezipili zinabameli bazo bokwenyani ngokomzimba.
Umhlaba obonakalayo ufuziselwa sisipili somhlaba omnye; ilizwe le-astral ngesipili esinemigangatho emibini; Ingqondo yomntu ngamnye enemigangatho emithathu, ngelixa ilizwe lokomoya lifuziselwa sisipili esibonisa konke. Isibuko esineglasi enye sifana nomhlaba wenyama, onokuthi ubonwe kwicala elinye kuphela-icala langoku lomzimba. Isibuko esineentloko ezimbini sibonisa ilizwe le-astral, elinokujongwa kumacala amabini kuphela: okwedlulileyo kunye noko sele ikho. Isibuko esineentloko ezintathu sibonisa ilizwe leengqondo elinokuthi lijongwe kwaye liqondwe kumacala amathathu: elidlulileyo, langoku nelizayo. Isibuko esijikeleze yonke imela ilizwe lokomoya elisondeleyo nelisaziwa kuwo onke amacala nakuwo elidlulileyo, langoku kunye nelizayo lokudityaniswa kobunaphakade.
Umphezulu omnye yindiza; amacala amabini ikona; iindawo ezintathu zenza iprism; Umphezulu womhlaba wonke, yindawo yekristale. Ezi ziimpawu ezibonakalayo zezizibuko zezomzimba, zengqondo okanye zezomhlaba, zeengqondo nezokomoya.
Okokwenyama lihlabathi leempawu ezibonakaliswayo; i-astral, ilizwe lokubonakalisa; Ingqondo, ilizwe lokuphuma, ukuhanjiswa, ukuhanjiswa; ngokomoya, lihlabathi leembono, elisisiqalo, nendalo.
Umhlaba obonakalayo sisipili sayo yonke enye into yomhlaba. Zonke izinto zehlabathi zibonakaliswa zehlabathi lomzimba. Ukulungelelwano lokubonakaliswa, ilizwe lezinto ezibonakalayo lelona nqanaba liphantsi lifikelele kwinkqubo yokuqunjelwa kunye nesiqalo senkqubo yokuvela kwezinto. Ukubonakaliswa kokukhanya, xa ukukhanya kufikelela ezantsi kwelona nqanaba lisezantsi, liyagoba libuyele emva libuyele kwindawo ephezulu ukusuka kuyo. Lo mthetho ubalulekile. Imela umbono wokuba izinto ziyafana kunye nokwenziwa kwezinto. Akukho nto inokukhutshelwa engabandakanyekanga. Akukho kukhanya kunokubonakaliswa sisipili esingaphoswanga esipilini. Umgca wokukhanya njengoko ubetha isipili uyakubonakaliswa kwikona enye okanye ujikeleze apho ubetha khona isibuko. Ukuba umgca wokukhanya uphoselwe kwisipili kwi-engile ye-45 degrees iya kubonakala kuleyo engile kwaye kufuneka sazi nje i-angle apho ukukhanya okuphoselwe khona kumphezulu wesipili ukuze sikwazi ukuchaza i-angle eya kubonakala. Ngokwendlela yokubonakalisa ukuba ungowuphi na umoya obandakanyeke kumcimbi, into iya kuguqulelwa emoyeni.
Umhlaba obonakalayo uyayiyeka inkqubo yokutshintsha kwaye ujike nento ebandakanya ukubuyela kumgca wokuzivelela, ngendlela efanayo nesipili esibuyela umva ngokubonisa ukukhanya okuphoselwe phezu kwaso. Ezinye izibuko ezibonakalayo zibonisa izinto ezibonakalayo kuphela, njengezinto ezibonakalayo kwiglasi ekhangelekayo. Ezinye izibuko ezibonakalayo zibonisa ukukhanya okuvela kwiminqweno, ingqondo okanye ilizwe lokomoya.
Phakathi kwezibuko ezibonakalayo kunokuchazwa amatye, njenge-onyx, idayimane kunye nekristale; izinyithi, ezinjengesinyithi, i-tin, isilivere, i-mercury, igolide kunye ne-amalgams; iinkuni, ezifana ne-oki, mahogany kunye ne-ebony. Phakathi kwemizimba yezilwanyana okanye amalungu amalungu iliso libonisa ukukhanya okuphoswe phezu kwalo. Kwaye kukho amanzi, umoya, kunye nesibhakabhaka, zonke ezibonisa ukukhanya, kunye nezinto ezenziwe zibonakalayo.
Izibuko ezibonakalayo zineendlela ezahlukeneyo. Kukho izibuko ezinamacala amaninzi kunye ne-beveled. Kukho i-concave kunye ne-convex, ende, ebanzi kunye nezibuko ezincinci. Kukho izibuko ezivelisa iziphumo ezibi, ezigqwetha impawu zalowo ujongene nazo. Ezi ntlobo ezahlukeneyo zezibuko zimele iinkalo zehlabathi lenyama ezibonakalayo esipilini sezinye izinto zomhlaba.
Oko umntu akubona emhlabeni kukubonakaliswa kwento ayenzayo emhlabeni. Ilizwe libonisa oko akucingayo kwaye akwenzayo. Ukuba iqaqobana kwaye ilingise inqindi kuyo, iya kuba njalo nakuye. Ukuba uyahleka, lo mboniso uhleka nawo. Ukuba uyamangaliswa yiyo loo nto, uya kubona umangaliso oboniswe kumgca ngamnye. Ukuba uziva lusizi, unomsindo, unekratshi, ubuqhetseba, ubuqhetseba, ubuqhetseba, ubuqhetseba, ukuzingca, ukupha, uthando, uya kubona ezi zinto zifakwe kuye, abuyele kuye, lihlabathi. Lonke utshintsho lweemvakalelo, ukoyikeka, uvuyo, uloyiko, uthandano, ububele, umona, ubugqi, buyabonakala.
Konke okuza kuthi ehlabathini kodwa kukubonisa into esiyenzileyo okanye esehlabathini. Oku kunokubonakala kuyinto engaqhelekanga kwaye kuyinyani ukujonga izinto ezininzi ezenzeka kunye neziganeko ezehlela umntu ngexesha lokuphila kwakhe kwaye ezingabonakali ngathi azidibananga okanye zidibene nayiphi na iingcinga nezenzo zakhe. Njengezinye iingcinga ezintsha, ziyamangalisa, kodwa ayizonyani. Isibuko siya kubonisa indlela enokuba yinyani ngayo; umntu kufuneka aqhelane nomthetho ngaphambi kokuphela kwawo.
Ngokuzama kwizibuko umntu unokufunda ngezinto ezingaqhelekanga. Makwenziwe izibuko ezibini ezinkulu ukuze zijongane kwaye ezinye zijonge kwesinye sezibuko. Uya kubona ukubonakaliswa kwesimo akuye. Ndimjongise imbonakalo yokubonisa kwakhe into azakuyibona esipilini emva kwakhe. Aphinde ajonge esipilini phambi kwakhe azokuzibona njengomboniso womboniso wokuqala wokuqala ukubonakalisa kwakhe. Oku kuyambonisa imbonakalo emibini yembono yangaphambili kunye ezimbini zokujonga ngasemva ngokwakhe. Makangoneliseki yile nto, kodwa jonga kude kakhulu kwaye uza kubona enye into ebonisa enye nenye. Ngamaxesha onke xa ekhangela abanye uya kubabona, ukuba ubungakanani bezibuko buvumile, ade afike azibonakalise eyolula kumgama ngokokufikelela kweliso, kwaye imbonakalo yakhe iya kujongeka njengomgca wamadoda wolula indlela ende de bangabi sabonwa kuba iliso alikwazi ukubona ukuba kukude. Singawuqhubekisa lo mfanekiso ubonakalayo ngokunyuka ngokunyuka kwamanani ezibuko ukuze amane, isibhozo, ishumi elinesithandathu, amashumi amathathu anesibini, ngababini kwaye sijongane. Ke inani lokubonakaliswa liya kwandiswa kwaye umvavanyi akasayi kuba nembono yangaphambili nangasemva kuphela, kodwa uya kubona umfanekiso wakhe ukusuka kwicala lasekunene nangasekhohlo nakwii-angile eziphakathi. Lo mzekeliso unokuqhubeka ngakumbi ngokuba igumbi lonke liqulathwe zizibuko, umgangatho, umnyango kunye nodonga ezine zezibuko nakwiikona zazo zibekwe izibuko. Oku kunokuqhubeka ngokungapheliyo. Ke umvavanyi uya kuba kummaze, azibone evela phezulu nangaphantsi nangaphambi nangasemva, ukusuka ekunene nasekhohlo; kuzo zonke ii-angles kunye nokuphindaphinda kwezinto ezibonisiweyo.
Into eyenzekayo okanye ebonakaliswa kuthi ngesenzo somnye umntu, isenokubonakala ngathi ingumehluko kwinto esiyibonisayo okanye esiyenzayo kwihlabathi namhlanje, kwaye, ngelixa siyithatha njengembono yangoku, asiyi kubona unxibelelwano. Ukubona uqhagamshelo sisenokufuna esinye isipili, esibonisa esedlulileyo. Emva koko siza kubona ukuba into eyaphoswa phambi kwethu namhlanje, kukubonakaliswa kwale nto isemva kwethu. Izinto ezenzekileyo ezingenakulandelwa kwizizathu zazo okanye kwimithombo yazo, ziimpawu ezibonisiweyo eziphoswayo ngoku, zezenzo kwakudala, iintshukumo ezenziwe ngumbali, ingqondo, ukuba akukhona kulo mzimba kobu bomi, ke kwelinye ilungu lomzimba ubomi bangaphambili.
Ukubona imbonakalo yokubonisa, yokomntu oqhelekileyo oyimfuneko ukuba nesipili ngaphezulu kwesinye. Into ebalulekileyo kulingo kukuba ube nokukhanya okuya kuthi kuvume imeko yakhe kunye nezenzo zakhe. Ngendlela efanayo ke kubalulekile ukuba umntu azokubona unxibelelwano phakathi kwendlela yakhe yangoku kunye nezenzo zayo nezinye iindlela kunye nezenzo zabo zangaphambili, kunye nezinye iintlobo zomhlaba kule mihla, ukuba abe nohlobo lwe- Imini kwaye uyibambe ekukhanyeni kwengqondo. Nje ukuba ifomu iboniswe kubonakaliswa kukukhanya kwengqondo, oku kuboniswa kukukhanya kwengqondo, xa ukukhanya okukuzivelelayo, kuya kubonakala kwakhona. Ukuboniswa ngalunye kukuqhubeka kwesibonakaliso sangaphambili, nganye ifom yefom yangaphambili. Ke zonke iifom kunye nokubonisa okuza kuhamba ekukhanyiseleni kwengqondo yomntu ngamnye, ngothotho lwentuthuko yomzimba, kuya kubonakala ngokucacileyo kunye namandla kunye nokuqonda okulungelelaniswe kumandla engqondo yokujonga, ukwahlula, kunye nokucalucalulwa okwangoku ezidlulileyo kunye nokunxibelelana kwazo.
Akunyanzelekanga ukuba ubani abe nezibuko ukuze abone imbonakalo yakhe ukuba unokuvavanya ngokubonisa ingqondo yakhe ekukhanyeni kwayo. Izibuko ezininzi njengoko zinokumisela kwaye apho aya kubona khona ukubonakalisa kwakhe, ziphindwe kabini kwaye zanda ngokungenasiphelo ngenani, zininzi kakhulu anokuzibona ngaphandle kwezibuko, ukuba uyakwazi ukubonakalisa engqondweni yakhe. Ubengenokwazi nje ukubona imbonakalo yomzimba wakhe engqondweni yakhe, kodwa unokukwazi ukunxibelelana kwaye abone ubudlelwane bazo zonke izinto ezenzeka kuye, ngobomi bakhe bangoku, kwaye uya kwazi ke ukuba akukho nto iyenzayo Yenzeka kodwa enxulumene ngandlela ithile kubomi bakhe bangoku, njengesibonakaliso kwizenzo zobomi bangaphambili, okanye abo bezinye iintsuku kobu bomi.
Yonke into esemhlabeni, i-animated okanye engaphilanga ebizwa,, ingumfanekiso okanye ubonakaliso lowomntu kumanqanaba akhe ahlukileyo. Amatye, umhlaba, iintlanzi, iintaka kunye nezilwanyana kwiintlobo ngeentlobo zazo zeentlobo, kukungcamngca kunye nokubonisa kwiimpawu zomzimba zeengcinga neminqweno yomntu. Abanye abantu, kuzo zonke iiyantlukwano zabo bobuhlanga kunye neempawu zabo kunye nokuhluka okungafaniyo komntu kunye nokufana, ziimpawu ezininzi zamanye amacala omntu. Le nkcazo inokubonakala ingeyonyani kulowo ingenzekiyo ukuba ibone unxibelelwano phakathi kwakhe nezinye izinto kunye nezinto. Kunokuthiwa ukuba isipili sinika ukubonakalisa kuphela, ezibonakalisa kungezizo izinto ezibonisiweyo, kwaye, ukuba izinto ezo zahlukile kwimbonakalo yazo, nokuba emhlabeni izinto zikhoyo ngokwazo njengendalo ezizimeleyo. Ukuba izinto zomhlaba zinobubanzi, ezibizwa ubude, ububanzi nobubanzi, kanti izinto ezibonakalayo kwizibuko ziimpawu ezibonakalayo, ubude nobubanzi, kodwa bungabi bukhulu. Ngokubhekele phaya, ukuba isibonisi esipilini siyanyamalala kamsinya nje ngaphambi kokuba into isuswe, ngelixa izinto eziphilayo ziqhubeka nokushukumiseka njengamaziko ahlukileyo emhlabeni. Kwezi nkcaso zinokuphendulwa ukuba umzekeliso wento ayisiyonto uyibonisayo, nangona unawo umfanekiso wayo.
Ndijonge kwiglasi ekhangelekayo. Ngaba iglasi iyabonakala? okanye imvelaphi? okanye leyo ebambe imvelaphi neglasi kunye? Ukuba kunjalo ke ukubonakalisa akubonakali ngokucacileyo, kodwa ngendlela engacacanga kuphela. Kwelinye icala, ngaba ubuso kunye nolwandlalo lomfanekiso lubonakala ngokucacileyo? Ukuba kunjalo ke iglasi, imvelaphi yayo, okanye loo nto ibambe ezi zimbini azibonwa. Isibonakaliso siyabonakala. Ngaba uqhagamshelo luhambelana njani nento elubonisayo? Akukho nxibelelaniso lunokubonwa phakathi kokubonakaliswa kwento yayo. Njengomboniso, yahlukile ngokwayo kwinto ebonakalisa yona.
Kwakhona, iglasi ekhangelekileyo ibonisa inani lamacala ento evulekileyo kuyo. Yonke into enokuthi ibonwe linani ngabanye inokubonwa ngokuboniswa kwiglasi yokujonga-iglasi. Sibona umphezulu wento kuphela yeglasi ekhangelekayo; kodwa akusekho namnye ubonayo emhlabeni. Kuphela kuphela okubonakalayo kumphezulu kubonakala, kwaye kuphela xa ingaphakathi lifika kumphezulu, emva koko libonwa emhlabeni. Emva koko iya kubonakala kwiglasi ekhangelekayo. Uluvo lobunzulu okanye nobungqingqwa ngokuqinisekileyo kwaye lubonakala ngokucacileyo kwiglasi yokujonga-njengayo nayiphi na into ngaphandle kwayo. Umgama ubonwa kwiglasi yokujonga-nje kwaye unokubonakala ngaphandle kwawo. Ukanti iglasi ekhangelekayo ingumphezulu kuphela. Unjalo ke umhlaba. Siphila kwaye sihamba phezu komhlaba njengokwenza izinto kwiglasi ekhangelekayo.
Amanani kunye neefom ezihambahamba emhlabeni, kuthiwa zibakhona ngokwazo kwaye zahlukile kwimbonakalo yazo kwiglasi ekhangelekayo. Kodwa oku kunjalo kuphela kubude bexesha hayi kwinyani. Iifom ezihamba phezu kobuso bomhlaba ziimpawu ezibonakalayo kuphela, njengeglasi yokujonga. Umfanekiso abawubonakalisayo ngumzimba we-astral. Oko akubonwa; kuphela ukubonakaliswa kubonakala. Ezi fomu zibonakalayo kwihlabathi zihlala zihambahamba ukuya kuthi gqi umfanekiso ezibonisa ukuba zikunye nazo. Xa lo mfanekiso ushiya, ifom, nayo, iyanyamalala, njengakwiglasi egadileyo. Umahluko ukho ngexesha kuphela, kodwa hayi kumgaqo.
Umntu ngamnye wahlukile komnye umntu ngokubala, umzo kunye neempawu, kodwa kwinqanaba kuphela. Ukufana komntu kubonakaliswa yinto yonke. Impumlo yempumlo nokuba ikrwelwe okanye ikhombe, ithi cwaka okanye ijikeleze, idumbile okanye incinci, yinde okanye imfutshane, icekeceke okanye igudileyo, ibubala okanye ilubala; iliso iliso nokuba limdaka, luhlaza okwesibhakabhaka okanye mnyama, almond okanye ibhola limile. Inokuba ithambekile, inamanzi, inomlilo, inamanzi, se iliso. Indlebe inokuba yindlovu okanye inciphise ngokulinganayo, ngemikhondo nemibala ethandekayo ngathi yigobolondo yolwandle okanye ubukhulu kwaye inzima njengesiqwengana sesibindi, kodwa yindlebe. Imilebe inokubonakaliswa ziinqathe ezomeleleyo, ezithambileyo okanye ezibukhali kunye nemigca; umlomo unokubonakala ngathi ulukhuni okanye ulusu olucekeceke ebusweni; ingumlomo nangona kunjalo, kwaye ingakhupha izandi ukonwabisa izithomi okanye ukoyikisa abazalwana, iidemon. Iimpawu zezomntu kwaye zimele ukwahluka okwahlukileyo kunye nokubonakaliswa kwendalo yomntu emacaleni omntu.
Ukudalwa kwabantu ziintlobo ezininzi okanye izigaba zobume bomntu ezibonakaliswa kubuninzi bokubonakaliswa kwamacala okanye izinto ezahlukileyo zobuntu. Ubuntu yindoda, oyindoda-obhinqileyo, ongabonakaliyo, ongaziboniyo ngaphandle kwezibonakalaliso zawo zimbini, ebizwa ngokuba yindoda nomfazi.
Sijonge izibuko ezibonakalayo saza sabona ezinye zezinto ezibonakalisa. Ngoku makhe siqwalasele izibuko zengqondo.